Isisayinise uLaffor noKonqobe iChippa emizamweni yokuvika izembe - Impempe
Isisayinise uLaffor noKonqobe iChippa emizamweni yokuvika izembe
U-Anthony Laffor useveze ukuthi ukubona inhlansana yethemba elokoza kusihlalo weqembu, uSivuyile “Chippa” Mpengesi, ngekusasa leqembu yikona okumenze waqoma iChippa United emaqenjini amaningi abemshela.
Le nsizwa yaseLiberia imenyezelwe nowayengukaputeni we-Under 20 (Amajita) uSiyabulela Konqobe njengabadlali abasha beChilli Boys ngoLwesihlanu ntambama. UKonqobe, oneminyaka engu-25 unegama elibi kuleli njengoba aziwa ngezidubedube zokubuye anyamalale engaziwa ukuphi.
Nokho uLaffor waziwa ngamava akhe kanti ubesehlale isikhathi eside kwiMamelodi Sundowns ngaphambi kokuba ingabe isayivuselela inkontileka ekupheleni kwesizini edlule.
“Ngifuna ukuqala ngokubonga umqeqeshi nomphathi ngokunginika leli thuba. Akubanga isinqumo esinzima kimi ukujoyina iChippa emuva kokukhuluma nomqeqeshi, ngivele ngazi ukuthi kulapho ngimele ngibe khona kwiChippa.
“Kuwo wonke amaqembu abengeshela, iChippa ivele yaphuma phambili,” kusho lo mdlali owafika eNingizimu ezodlalela iJomo Cosmos ngo-2005.
Uthe njengoba ebesevele eke waba neqembu izinsukwana ezimbalwa ngaphambi kokusayina, usebonile ukuthi uzongena khaxa esitayeleni sikaDan “Dance” Malesela ongumqeqeshi njengamanje.
“Ngicabanga ukuthi ngizongena khaxa. Abadlali bakhululekile futhi sengivele ngibe lana izinsuku ezintathu ngihleli neqembu, manje sekusele kubaqeqeshi (ukuthi ngiyadlala yini emdlalweni olandelayo). Mina ngilana ukuzosebenza, futhi yilokho engizogxila kukho.
“Ngijabule lana. Ngiyayibona inhlansana yethemba ngokuthi iqembu libhekephi. Ngizokwenza konke okusemandleni ami ukusiza iqembu lifike lapho lifisa khona,” uchaze kanje uLaffor (35).
ULaffor kungenzeka adlale umdlalo wakhe wokuqala kwiChilli Boys uma seyibhekene neTS Galaxy eMbombela Stadium ngoMgqibelo ngo-3.30 ntambama. Kuzobe kungokokuqala uMalesela ebhekana naleli qembu laseMpumalanga elisanda kumkhomba indlela ngenxa yokugqoza kwemiphumela.
Previous Previous post: Azoyivula ngelula awaseSoweto iNedbank Cup njengoba eqhathwe naweGladAfrica Championship
Next Next post: Uzoba yimpi yabagadli oweSuperSport neSundowns